Asa an-tànana ao amin'ny orinasan'ny orinasa & ny asa any Atsinanana
Gulf Jobs ao Dubai Companies
navoakan'ny Dubai City Company at Enga anie 1, 2018
Asa an-kianja ao Dubai Lasa ny orinasa fomba iray hafa ahazoana asa any amin'ny orinasa Arabo Mitambatra. Ny orinasa tsara indrindra miasa ao Dubai dia afaka mahita ao amin'ny Forbes ambony orinasa. Miaraka amin'izany, ny orinasanay dia namorona orinasa tsara indrindra hiasa ao Dubai.
Ireo orinasa tao amin'ny faritr'i Golfa dia nahavita traikefa kely tamin'ny 2016. Amin'ny fotoana sasany, dia toekarena ny toekarena ao amin'ny 2018 ary manaraka taona 2019 sy 2020. Niakatra koa ny vidin-tsolika raha ampitahaina tamin'ny taona teo aloha.
Vokatr'izany, ny tetikasa vaovao dia manampy amin'ny fitomboana tsenam-bola manerana ny United Arab Emirates faritra. The Expo 2020 nanomboka nanomboka nampiakatra asa vaovao ihany koa. Indrindra ho an'ny, Dubai sy Abu Dhabi.
Na dia misy amin'ny faritra sasany amin'ny firenena ao Emira Arabo Mitambatra dia mitombo haingana kokoa. Ary maro kokoa Asa any amin'ny orinasa Dubai dia miatrika fangatahana vaovao fangatahana vaovao. Ny fanomanana ekena dia mitondra fanamby vaovao ary fanatanterahana fananganana vaovao efa nomanina tetikasa any UAE.
Ny fitambaran'ny lanjan'ny tsenan'ny 100 ambony indrindra orinasa any amin'ny tontolo Arabo nahatratra $ 772 miliara tamin'ny volana Aprily 2017, nahazo 12% tamin'ny taon-dasa. Mitombo tsy miovaova ny UAE noho ny sandan'ny tsenan'ny tsenambola Business.
Ankoatra izany, ny ankamaroan'ireo orinasa avy any Abou Dhabi sy Dubai dia miorina ireo orinasa 100 ambony ao amin'ny tontolo fandraisam-peo Arabo. Ary ny mpikaroka dia nahatratra asa tamin'ny $ 772 milliarda orinasa Dubai tamin'ny Aprily 2017. Ka ny ankamaroan'ny nahazoan'ny 12% tamin'ny taona teo aloha.
Fa maninona no mendrika ny hanomboka hiasa ao amin'ny Gulf Company?
Ny orinasam-pifandraisana Dubai dia manangona ny tombony azo avy amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Nihena ihany koa ny fandaniam-bola tamin'ny HR tamin'ny 9.7% tamin'n'izay fomba nahatratrarana azy ireo hahatratra $ 52.9 miliara dolara, varotra ao amin'ny United Arab Emirates. Ao an-tsaina, ity tetikasa vaovao ity dia nitombo tao anatin'ny totalin'ny fanakarama. Ny iray raha toa ka ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy indostrialy ireo toerana ireo. Ireo mpikaroka momba ny asa dia tokony hihevitra ity sehatra ity ho fotoana. Iray amin'ireo ohatra ny Etisalat. izany Dubai company no orinasa lehibe indrindra momba ny fifandraisan-davitra lehibe indrindra any The UAE.
Ankoatra izany, ny sehatra rehetra dia mampiseho fa ny ankamaroan'ireo orinasa mitombo ao amin'ny Industries any Qatar. Ny mpiasa ao Dubai dia afaka raisina avy amin'ireo orinasa indostrialy lehibe indrindra ao amin'ny lisitra. Ny orinasa any Atsinanana Afovoany dia nampitombo ny fananany nitombo 2.8%. Ary ny Qatar, Koety ary Arabia Saodita, ary nahavita nahazo mihoatra ny 3.8% hahatratra ny $ 288.3 lavitrisa varotra any Dubai sy Doha. Ny orinasa dia mitantana ny asany mba hahazoana varotra mihoatra ny $ 2.7 trillion ao, 2008 ary mijery mandroso amin'ny fitomboan'ny tsirairay mandritra ny 2019.
Amin'ny ankapobeny dia miteny mpitady asa any Moyen Orient, manandrana mahazo asa amin'ireto orinasa ireto. Satria raha niasa tao amin'ny orinasa Dubai ny asa aman-draharaha, dia asa azo antoka. Indrindra ho an'ireo mpila ravinahitra vaovao any Moyen-Orient. Ao anatin'ireo toe-javatra ireo dia vakio ny torolalana mankany amin'ny Golfa asa any Dubai Companies.
Nahoana no orinasa tsara indrindra any Moyen-Orient?
Iray amin'ireo orinasa tsara indrindra ho an'ny asa miorina ao Arabia Saodita ary Qatar miaraka amin'i Kuwait. Amin'ny lafiny iray, ireo orinasa avy any Mbola manjaka i Dubai ny lisitra miaraka amin'ny orinasa 36. Ny ankamaroan'ny mpitady asa nifindra monina avy any Qatar sy Arabia Saodita nankany UAE. Mitombo ny orinasa any Dubai ao amin'ny kaontinanta 4. Ary manana fisian'ny fandraharahana any amin'ny firenena 50 mahery izy ireo. The orinasa any Moyen Orient tsirairay mifehy ny fiasa avo lenta.
Afaka mahita asa any amin'ny orinasa Dubai mora ianao manana traikefa tsara. Misy mihoatra ny 59% amin'ny orinasa ara-bola ao amin'ny UAE izay manakarama. Ohatra, raha manana traikefa amin'ny banky sy ny serivisy serivisy ara-bola ianao. Ary manana MBA amin'ny fitantanam-bola ianao. Tokony hiara-hiresaka amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fikambanan'ny banky UAE ianao. Ary fampifangaroana sy fahazoana ny departemanta HR ao UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. Azo antoka fa hahaliana ny handray anao ny CV.
Ekipa tsara iray hafa azonao eritreretina Ny fitantanana ny asanao dia Katar Marokko sy Ejipta. Ary ny ankamaroan'izy ireo dia mbola mitazona toerana ambony eo amin'ny raharaham-barotra any Moyen-Orient. Amin'ny maha orinasa ambony voatanisa dia nametraka ny banky amin'ny faritra GCC izahay. Ny fitsaboana tsara indrindra dia ara-bola sy menaka. Ny ankamaroan'ny orinasa any Moyen Orient dia mahagaga manomboka manomboka miasa amin'ny uber. Amin'ny maha-tsara indrindra antsika any UAE, nametraka fampifangaroana NBAD sy FGB izahay. Ary avy eo dia Banky Abu Dhabi Voalohany izay niasa tao Abu Dhabi any UAE.
Ny asa momba ny Golf sy ny orinasa any Gulf
Ny ankamaroan'ny orinasa any Moyen Orient dia mandroso miakatra. Na dia tratra mafy aza ny vola ejipsiana tamin'ny herintaona nihemotra. Noho izany ny sasany amin'ireo orinasa Egyptiana Mitana ny lanjan'ny orinasa i Dubai ao amin'ny orinasa 100 ambony ao amin'ny lisitr'izao tontolo izao Arabo.
Dubai City mampiseho ho tanàna tsara indrindra hiara-miasa amin'ireo orinasa manana isa ambony indrindra. Satria ny fifanakalozana fifanakalozana United Arab Emirates dia nahazo mihoatra ny 175%, noho ny fitomboan'ny tsena bitcoin. Ny orinasa avy any UAE dia manao azy ho mpandraharaha lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny orinasa. Ao amin'ny asa an-tànana an-dranomasina eo aloha any Dubai orinasa efa ela mitombo ho an'ny expats.
Ohatra ny orinasa Global Telecom Holding. Ity orinasa ity no mpandresy ambony indrindra ao amin'ny lisitry ny orinasa mpanakanto ambony any Amerika. Etsy ankilany, tamin'ity taona ity dia i Abu Dhabi sy Voaray i Dubai orinasa vaovao vitsivitsy: Omantel, Banky Nasionaly Bahrain, Emaar The City Economic and Saudi Ground Services. Ny ankamaroan'ity orinasa ity ao anaty lisitra dia manakarama kandidà vaovao manerana izao tontolo izao.
Top Companies 100 miasa any Afovoany Atsinanana
Tsipika hafa ao amin'ny Golf Gulf Jobs in SABIC
Andao hanomboka amin'ny orinasa lehibe SABIC. Ny fitantanana dia nino foana fa ny SABIC dia manantanteraka fitantanana manokana. Ary afaka manova zavatra tokoa ianao. Miasa ao amin'io orinasa io mila mivadika ianao. Ny saina misaina sy mamirapiratra. Fa mialoha anao kosa dia hahazo ny fahalalahana hamadika ny heviny izy ireo. SABIC orinasa no tsara indrindra ary Orinasa No.1 any UAE.
Ny orinasa toa ny SABIC manana dia kolontsainan'ny miasa manokana. Ity orinasam-barotra ity izay mitady hahita fitantanana misokatra malalaka. Nomena fahaiza-manao manokana momba ny fahaiza-manao fanaingoana sy ny fanontanian'ny olona.
SABIK dia mamorona ny fepetra ho an'ny mpiompy vaovao. Ary indrindra indrindra ho an'ny mpikaroka iraisam-pirenena mpikaroka. Noho izany raha toa ianao ka miezaka hanatontosa asa tontolo iainana. Jereo kely ny tranonkalan'ny hetsika ao amin'ny 2019.
Ilaina ny maka fotoana miaraka amin'ity orinasan'ny teknolojia ity. Miezaha hahazo ny hery ilainy. Tsy sarotra be ny manomboka ny asa ho an'ny SABIC. Indrindra raha expat ianao dia ianao no olona afaka mahita vahaolana vaovao. Ankoatra izany, toerana ny fahafaha-manao eo amin'ny Business arabo izay manova an'izao tontolo izao ho tsara kokoa.
Tsia any Jobs Golf Jobs any Dubai Companies CBI
Qatar National BankOrinasa hafa hanandramana izany mba hahazo asa. Ny sehatry ny banky dia indostrian'ny fitomboana. Ity orinasam-barotra ity dia mitantana ny fahitan'ny UAE. Ny fahitana sy ny iraky ny CBI dia ny hanompoan'ny mpanjifa iraisam-pirenena sy eo an-toerana. Manofana ny olona amin'ny orinasa CBI Company amin'ny fanampiana azy ireo hiroborobo amin'ny asany fiainana manokana sy asa aman-draharaha.
Ny CBI dia mahazo tànana ho fanohanana ireo mpampiasa vaovao. fanangonana fahitana avy amin'ny governemanta UAE. Ny sektan'ny CBI tsirairay dia mitantana ny fahasamihafana sy ny fampidirana. Amin'ny lafiny tsara, orinasa mampiasa vola amin'ny olom-pireneny. Manana dia voamarina ny rakitsariny izay nampiroborobo ny toerana fitantanana ambony.
Raha afaka mifandray sy manorina tatitra matihanina ianao. Tokony hiaraka amin'ity orinasa ity ianao. ary mirehareha manampy ny mpanjifa hameno ny filan'izy ireo. Mazava ho azy fa io orinasa io dia mampiasa vola ao amin'ny teknolojia farany any Emirates Arabo.
Joba F3 FAB ao Dubai Company
Bank Bloomberg voalohany voalohany tany Abu Dhabig Abu Dhabi Bank voalohany ho mpampiasa ambony ho an'ny asa ao Dubai Companies. Ity orinasa ity dia mino mafy fa ny fifandraisana matanjaka amin'ny mpiasa. Mazava ho azy, manova an'ity tontolo ity ho tsara kokoa. Ny fitantanana ny FAB no mampiavaka ny fahalalan'ny tsirairay ny zavatra ilain'ny mpanjifantsika.
Ny FAB sy ny anarana mahazatra dia Banky Abu Dhabi Voalohany. ary ny tena zava-dehibe amin'izy ireo dia fitazomana asa. Ny orinasa dia mamela ny mpitantana hanorina fifandraisana maharitra amin'ny mpampiasa.
To be the company successful in the Middle East this company manangana ekipa samihafa ao amin'ny Gulf Jobs ao Dubai. Raha mitady tanora tanora, mavitrika, mavitrika ary maniry ianareo izay te hiara-hiasa aminao. Miaraka amin'ity orinasa ity dia afaka mahita izany ianao.
Ireo asa ao amin'ny Golfa dia mety ho tia mozika, indrindra miaraka amin'ity orinasa ity sy ny zavatra ataony ary miezaka hanompo tsara. Amin'ny maha-mpitsoa-ponenana vaovao ho an'ny Gulf Jobs, tokony ho vonona hiatrika fanamby vaovao ianao. Manomboka supercharge amin'ny asanao any Moyen Orient miaraka amin'ny FAB. Tokony hahaliana anao ny hiditra amin'ity banky ity amin'ny iraka ampanaovina azy ireo. Ny asa atolotra azonao atao dia azonao jerena amin'ny LinkedIn.
Ny Banky voalohany Abu Dhabi
Ny asan'ny Golfer N0.4 miaraka amin'ny NCB Bank
Ny NCB dia manome asa matihanina any Moyen Orient. Jobs ao Dubai Ny orinasa toy ny Banky NCB dia mety ho asa mahatalanjona. Ho toy ny vaovao fialokalofana ho an'ny asa ao Gulf ao Dubai Companies. Tena ilainao ny mametraka izany eo an-tampon'ireo mpampiasa tena tsara indrindra any Gulf.
Satria ity orinasa ity dia manana safidy lehibe kokoa ho an'ireo mpikaroka ho mpikaroka. Indrindra ho an'ny asa any amin'ny sehatry ny banky rehetra amin'ny asa GCC. Ny asa atao amin'ny NCB Bank dia mety ho an'ny nahazo diplaoma vaovao na olona manana traikefa. Ny banky NCB dia eo an-tampon'ny lisitra ho an'ny mpitantana vaovao amin'ny fanabeazana MBA.
Ity mpampiasa GCC ity dia manana fiheverana ny fitaran'ny tetezamita. Indrindra ho an'i Abu Dhabi sy Sharjah any UAE. Mihamaro izy ireo miasa sy manangana tranokala vaovao ho an'ny sampana. Ny fitantanana ny orinasa foana dia manolotra fahafahana miasa ho an'ireo izay te hiaraka ity Banky ity.
Izany orinasa manana ekipa HR tsara izany. Na dia fantarin'izy ireo ny mety ho mpampiasa mety indrindra sy ny tena ilainy amin'ny orinasa samihafa. Ny fahitana ny toerana vaovao dia mamorona asa vaovao any amin'ny faritry ny Golfa.
Ny fampandrosoana ny asa vaovao dia manana ny tsingerin'ny asa matanjaka. Amin'ny ankapobeny, ny sasany amin'ireo Indian ary Pakistane no miasa ao anatin'ny sehatry ny Bank miaraka amin'ity orinasa ity. Ankoatra izany, ny orinasa dia mametraka ny famaritana ny asa ho an'ny toerana tsirairay.
Ny tranonkala NCB dia mora ampiasaina. Ny ankamaroan'ny fikambanana izay manana fifanakalozan-kevitra Ny asa dia manolotra ho an'ny asa iraisam-pirenena. Avy amin'ny lehilahy sy vehivavy mitady mpikaroka afaka mahazo asa tsara. Jobs ao Gulf ao Dubai Companies ary manokatra varavarana ho an'ireo nahazo diplaoma vaovao Ny fanaovana ity orinasa ity hitady ny fidirana ao amin'ny NCB.
No.5 Etisalat UAE
Ekipa tsara iray hafa hiasa i Etisalat. Satria ity orinasa ity dia mampiasa ny teknolojia tsara indrindra kandidà avy any ivelany manerana izao tontolo izao. Ny orinasan'i Etisalat dia manome ny fahafahana tsara indrindra hiasa any Dubai sy Abou Dhabi. Indrindra ho an'ireo vahiny vahiny avy any Azia sy Afrika Atsimo.
Raha mijery ianao hanangana asa matanjaka tany Emirates Arabo. Tokony hampiasa ny rafitra fanaovan-tsarimihetsika momba ny asa an-dry zareo ny asany. Satria miasa amin'ny orinasa ity manome stabilité mpiasa vaovao sy ny fandanjalanjana.
Tena mora takelaka asa ahafahana mahazo asa. Ary afaka manana fijerena banga Jobs ianao. Orinasa tsara ho an'ny fitomboana sy safidy tsara ary manamboatra asa. Indrindra indrindra any amin'ireo firenena any amin'ny Golfa toy ny UAE, Arabia Saodita, ary Qatar.
Tsia any amin'ny Banky Al Rajhi
Ny Banky Al Rajhi dia tena iray amin'ireo banky Islamika manerantany. Ny banky Al Rajhi dia nanomboka ny asany amin'ny 1957. Hatramin'io fanatsarana goavana io dia tonga tamin'ity orinasa ity.
Ny mpiasa iray ao amin'ny Al Rajhi Bank dia manana traikefa amin'ny 50 taona. Ary mihoatra ny 90% amin'izy ireo faly manohy ny asany. Ny ankamaroan'ireo manampahefana ao amin'ny GCC miaraka amin'ny traikefa ara-bola dia manomboka ny indostrian'ny banky miaraka amin'ity orinasa ity.
Amin'ny lafiny tsara, miankina amin'ny foto-kevitra Shariana Islamika ny Bank. Ary tsara izany amin'ny raharaham-barotra Arabo. Ity bank ity dia nametraka fototra fototra ho an'ny ny asany rehetra ho an'ny mpiasa vaovao.
Raha mbola mijery ianao noho ny asa an-tery lava sy ny fahitana ny fisainany manoloana ny banky. Tokony alefanao any aminy ny CV anao. Al Rajhi Bank dia manangona ireo nahazo diplaoma vaovao sy mpikatsaka asa avy any Inde ary Pakistan. Amin'ny lafiny tsara, raha tianao ny hanana tanjona ambony dia ambony. Ity orinasa ity dia ho anao.
Inan, fanampiny, ho an'ny Banky asa sy ny Golf Gulf manolotra. Ity orinasa ity izay manome karama manomboka tsara sy noho ny fanajana lehibe ny fandraharahana arabo. Azonao atao ny mahazo fiakarana karama, alalana ary bonus. Raha ny fanazavana dia ity orinasa ity mamorona fonosana mifaninana ho an'ny mpiasa. Ary koa ny tetikasa vaovao miaraka amin'ny tsy misy mpitia fahafahana ao amin'ny Faritra Golfa.
Tsia ny banky Banky amin'ny Embidin'ny NBD
Manana anao ve ianao? Miasa any Emirates NBD. Mieritreritra ve ianao fa manana ny zavatra ilaina mba hiasa sy hitombo miaraka amin'ity Banky ity ?. Miaraka amin'ny Emirates amin'ny NBD, moa ve ianao vonona ny hahomby amin'ny orinasa Arabo? fa alohan'ny hanombohana ny fangatahana ny toerana vaovao. Mijery ary manapa-kevitra izay tianao hatao ary inona ny sehatra tianao ho azo tanterahina. Ity orinasa iraisam-pirenena ity dia orinasa mitombo.
Nahavita nandinika ity firehana mahavariana ity ny orinasam-pifandraisana Dubai City. Ary ny ankamaroan'ireo mpila ravinahitra izay miasa any amin'ny Emirates NBD dia milaza fa orinasa mahay miasa izy io. Noho izany azo antoka fa manana Resume mahay ianao ho an'ity orinasa ity. Matetika ny orinasa no nanolotra asa amin'ny tranokalan'ny mpandraharaha. Noho izany dia ho mendrika ny hijery ireo orinasa hirotsaka an-tsena ao UAE.
Ny orinasan'ny orinasam-pamokarana Saodiana Saodiana
Heverin'ny orinasa herinaratra Saodiana mitondra ny nofinofinao. Atombohy ny fitsangatsanganana ny olombelona. Ny orinasa Saodiana mitantana ny fototry ny azy tetik'asa fampandrosoana any UAE. Ny orinasa Saodiana Saodiana mampiseho ny fitomboan'ny orinasany. Indrindra ao amin'ny 2018 sy 2019.
Ny ankamaroan'ireo orinasa any Moyen-Orient. Mampisy vola mahatsiravina isan-taona. Etsy ankilany kosa, ny orinasan'ny Saodiana dia mikendry ny hamolavola ny loharanon-karena programa manokana ho an'ny mpiasa vaovao.
Ity orinasa ity dia safidy tsara indrindra amin'ny fametrahana ny làlan-kizorana. Indrindra ho an'ny mpikaroka Golfa. Satria mety ampidirinao amin'ity orinasa ity ny asa fitaizana miaraka anao. Ity orinasa ity mametraka Indiana ho an'ny Asa ao Golfa any Dubai, Qatar ary mazava ho azy Arabia Saodita. Isaky ny azonao antoka ny fitantanan'izy ireo dia manaiky ianao mitady fikarakarana maharitra.
Hanana fahafahana hanana fahaizana manokana ianao. Indrindra indrindra ny handray ny toerana rehetra ao amin'ny orinasa. Hatramin'ny vao nahazo diplaoma ambony eo amin'ny sehatra mpitantan-draharaha. Izany ezaka izany dia nitombo ny fitomboan'ny asa eo amin'ny sehatry ny asa, Fanatsarana ny asany ho mpiasa indianina.
Tsia .9 Asa amin'ny Saudi Telecom
Orinasa tsara iray hafa ho an'ny Gulf Career mety ho Saudi Telecom. Ny fahafinaretanao sy ny fanirianao dia afaka mivoaka miaraka amin'ny Saudi Telecom. Manampy ity orinasa ity olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
STC dia toeran'ny asa fitoriana any Afovoany Atsinanana. Ity orinasa ity dia miteraka hoavy mamirapiratra ho an'ny mpiasany ara-barotra. STC no fitaomam-panahy ho an'ny fampandrosoana any Afovoany Atsinanana sy any amin'ny Hoala manontolo.
STC dia manandrana ny fanavaozana amin'ny zavatra rehetra hataonao. Avy amin'ny asa fototra ka hatramin'ny ambaratonga ambony. Ao anatin'ny lalana ho an'ny fiainanao nofinofy nofinofinao. Tokony hanatevin-daharana ny orinasa hiditra amin'ny dia iray ho moramora rahampitso.
Tsia ny Banky nasionalin'i Koety
Banky nasionaly any Kuwait mitady olona marisika sy manavao. Ny orinasa fandraisana mpiasa ho an'ny Golfa. Noho izany, ao an-tsaina, mitady hitady ekipa ve ianao ?. Alohan'ny hanaovana antoka dia hanana tatitra mahery vaika eo am-pelatananao ianao.
Isaky ny manomboka manomboka amin'ny Banky ianao. Hanomboka ny fampisehoana ny asanao ary hataonao ambony lavitra noho izay noheverinao azy ny zava-bitanao.
amin'ny tsara indrindra. Miaraha ao amin'ny toeram-piasana sy ny fiarahamonina mavitrika ao amin'ny NBK - mamolavola ny saina hendry sy ny ezaky ny ezaky ny Kuwait.
Manana sampan-draharaha fitantanana Talenta izahay azo antoka fa ampiharina ianao napetraka mba hahafahanao miroborobo. Any amin'ny NBK dia azonao atao ny mampihatra ny asanao amin'ny toerana mahasoa ary mahazo valiny - hiara-miasa am-pireharehana ianao satria mahalala fa mandray anjara amin'ny iray amin'i Koety ianao zava-bita lehibe indrindra.
Ho lasa iray amin'ny tsara indrindra, ho lasa mpikambana ao amin'ny ekipa NBK.
Tsia Welcome to The ADCB Bank
Ny orinasa iray hafa avy amin'ny lisitra ho an'ny Gulf Jobs dia ADCB. Ny tanjon'ny orinasa dia ny ho lasa banky sarobidy indrindra any UAE. Nanomboka ny fananganana azy ao amin'ny 1985 ny orinasa. Ary avy eo dia nitombo be ny banky. Ankoatra izay, ny fisian'izy ireo any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra dia fantatra tsara for expats. Ampiharo amin'ny orinasa ity orinasa ity ary ahazoana asa tsara.
Ity orinasa ity dia nanamafy ny tanjaka mba hanamafisana ny asa ho an'ny Golfa any Moyen-Orient. ADCB Bank dia mamela ireo mpikaroka iraisam-pirenena rehetra hahita fahafahana amin'ny fikambanana. Ity orinasa tonga lafatra ity dia ho an'ny olona liana amin'ny fanatanterahana asa iray mahafa-po. Amin'ny lafiny iray, manampy anao hiasa amin'ny mpiara-miasa iraisam-pirenena sy mpanjifa manerana izao tontolo izao izy ireo.
Tsia .12 Manafatra asa atao miaraka amin'i Samba
Ny orinasa tsara manaraka dia Samba. Izy ireo dia andrim-panjakana banky voalohany. Ankoatr'izany, ny fitantanana dia miasa miaraka amin'ny fisiana any amin'ny Golfa ary India Mumbai region. Ny orinasa Samba dia ekena erak'izao tontolo izao ary nisy asa mahavariana for expats. Ka ny fitadiavana asa miaraka amin'ity orinasa ity dia mety ho fahafinaretana. Indrindra ho an'ny olona vaovao traikefa ekena tsara tany Moyen-Orient.
Samba ny banky Samba manokana ny vokatra avy amin'ny banky sy ny banky manokana. Samy fantatra tsara ny tolotra mpanjifa samba manerantany. Noho izany dia ao an-tsaina, miezaha hanana toerana ara-bola miaraka amin'izy ireo na ny mpanjifa fahafahana.
Mikaroha asa vaovao iray miaraka amin'ny faniriany ho ambony amin'ny sehatry ny banky. Ny miasa miaraka amin'i Samba dia hahatonga ny mombamomba anao ho fantatra amin'ny maha-banky ambony azy. Ary ny fivoaran'ny asa dia azo antoka fa ao anatin'ny sehatry ny banky ao amin'ny KSA.
Fikambanana hafa dia Emaar. Fikambanana lehibe ao Dubai izy ireo. Miasa amin'ny sehatra maro ho an'ny mpiasa iraisam-pirenena. GFor example Iraniana mpitsoa-ponenana ary koa ireo mpiasa Indiana. Orinasam-pitiavana tia an'i Emaar. Satria ny asan'ny Emaar no fananany lehibe indrindra ao amin'ny UAE.
Emaar dia orinasa tsara, mikaroka enticiaan stic, energetic, flexible players players. Company mpitsoa-ponenana ao amin'ny faritra Golfa. Ka raha olona tena liana ianao. Afaka mankafy ireo fanamby fiasan'ny orinasa maneran-tany haingana ianao.
Ny orinasa fananana Emaar raha ny marina dia tsy maintsy ampidirina. Fikambanana lehibe izy ireo ary mitondra fidiram-bola goavana. Noho izany, ao an-tsaina, mahazo asa Tokony ho mora kokoa amin'izy ireo izany.
Tongasoa eto amin'ny DP World Company. Izy ireo dia orinasa manerantany amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny orinasa dia miditra amin'ny sehatra maro. Ny DP World dia manana ampahany manan-danja amin'ny sehatry ny famatsiana ny rafitra fitantanana. DP Global Trade dia orinasa manerantany. ary iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny mpikaroka vaovao.
Ny DP World dia manana portfolio an'ny sambo mpiasan'ny 77. Amin'ny ankapobeny dia ampy tsara izy ireo ho an'ny asa iraisam-pirenena. Andramo ny fanatanterahana azy, alaivo ny fotoana miaraka amin'ny DP World.
Ny fitantanana an'io orinasa io, amin'ny fanitarana, dia mahatsapa ny zana-pitantanana ny kofehy. Ny DP Word Global Trade dia tohanan'ireo orinasa 50 mifandraika amin'ny 40 any amin'ny kontinanta enina. Amin'izao fomba izao, Afaka mahazo traikefa amin'ny lafiny rehetra ianao.
Ny Banky BankyXXMUMX Riyad
Manomboka miasa miaraka amin'ny Banky Riyad. Satria ireo mitantana ireo mpiasa tsara indrindra ao amin'ny faritra Golfa. Ity orinasam-bola Bank ity no andrim-panjakana lehibe indrindra ao amin'ny Fanjakana Saudi Arabia sy Moyen Orient. Raha niara-niasa tamin'ity orinasa ity, Afaka mahazo toerana azo antoka ianao.
Ny orinasa dia tanindrazan'ny orinasa iraisam-pirenena. Banky Banky Riyad manana orinasam-piarahamonina matanjaka ara-barotra. Ka mendrika ny hijery ny antsipirihany amin'ny toerana misy azy ireo. Ity orinasa ity koa dia mihetsika Asa atao cryptocurrency any UAE.
Ooredoo dia telecommunication mitombo fikambanana ao amin'ny MENA. Mitombo hatrany izy ireo eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Ary azo antoka fa manana toerana ho azy ireo.
Orinasa Ooredoo miandry fatratra manakarama mpiasa manokan-tena. Raha mitohy hatrany manakaiky ny fahitan'izy ireo. Ny orinasa Ooredoo dia miandrandra ny ho isan'ireo orinasa ambony 20 fifandraisan-davitra manerantany eto amin'ny 2020. Vaovao miala tsiny miaraka amin'izy ireo isan'andro. Mandritra ireo toe-javatra ireo, andramo ny hampiakarana CV.
Izy ireo dia manakarama manampahaizana matihanina, manam-pahaizana manokana momba ny fifanakalozan-kevitra sy mpiasan'ny fifandraisana Worth to mitsidiha ny tranonkalan'ny mpikaroka. Indrindra raha mitady fandefasana haingana haingana amin'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra.
Tsanganasa laharam-pahamehana laharana 17 ao amin'ny SABB ho an'ny Banky britanika Saodiana
Fikambola ara-bola SABB dia fikambanana mahomby. SABB Britan'ny banky anglisy dia orinasa miaraka amin'ireo faniriana avo momba ny ho avy. Ambonin'izany, ity fikambanana ity dia manana fifandraisana matanjaka amin'ny HSBC.
Midika izany fa orinasa Banky Saodiana Britanika. Mitady olona manan-talenta foana. Indrindra ho an'ireo mpikaroka iraisam-pirenena izay mikatsaka ny hampitombo ny asany ary mahomby amin'ny HSBC ao amin'ny fikambanana raharaham-barotra.
Tokony tokony ho Mianara bebe kokoa momba ny asa ao amin'ny SABB. Zahao ny tranonkalany ho an'ny sasany amin'ny fahafahantsika miasa amin'izao fotoana izao, sy ny fomba fampiharana. Raiso ny CV vaovao nataonao dia mihazakazaka ary mifandraika amin'ny Banky anglisy British.
Tsia ny Banky Personal House KFH
Koety fitantanana trano ara-bola any Kuwait dia orinasa hafa ao anaty lisitray. Amin'ny ankapobeny ny KFH Karir ao amin'ny Golfa dia mendrika ny hahazoana. Mitovy amin'ny expat ho avy amin'ny sehatra Gulf Jobs, mila mandefa CV ho azy ireo ianao.
Ny trano ara-bola any Kuwait dia miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Ny iray amin'ireo zavatra tsara dia ny hoe manakarama ao amin'ny Golfa izy ireo. Ary ny fitadiavana asa miaraka aminy dia tsara ho an'ny expats any UAE. Na ny vehivavy mpaninjara aza dia mahavita mba hahazo asa any Koety. Amin'ireny toe-javatra ireny, ny KFH Personal House Banking dia tsara ho an'ny mpitsoa-ponenana.
Ny Banky Islamic Bank any Dubai
Banky Islamika any Dubai, tena liana mafy hiasa any Afovoany Atsinanana. Ny Banky Islamika voalohany dia manana nanokatra ny varavarany nanerana an'i Malezia mpiasa sy Pakistana. Saingy izy ireo dia manomboka any Pakistana, efa manerana ny Faritra afakomolon'ny Jobs Gulf.
Mampitombo ny fenitra amin'ny fitantanam-bola ny banky. Pakistan tamin'ny dia nataony izay nanome ny "Banking Classical World, ny Lalana Silamo". Izany dia fa maninona i Dubai Banky Islamika manasa manam-pahaizana matihanina manana talenta mba hikambana amin'ny DIBPL.
Ny asa ao anatin'ny tontolo silamo dia tsy ny asa. Tokony hatoky ny fihainoanao ny hafa ianao. Miaina amin'ny maha-Silamo manana fanavaozana fiainana mahafinaritra sy andraikitra ara-tsosialy. Ilay banky fitantanana ireo soatoavina fototra izay mamolavola ny tontolo iainantsika.
Tsia .19 Banque Saudi Fransi
Banque Saudi Fransi dia banky ara-barotra feno. Kaominina tena fantatra ho an'ny mpanjifa eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Ny orinasanay dia mijery ity orinasa ity ho toy ny iray amin'ireo mpampiasa vola ara-bola tsara ho an'ny Jobs Golf.
This firm It is a leading provider of financial services comprehensive. maro ireo mpivarotra miandrandra ny hiara-miasa aminy. Betsaka ny olona tia ny vokatra ara-bola avy amin'ity orinasa ity ao amin'ny fanjakan'i Arabia Saodita. Ka tena mendrika azy tokoa izany ho an'ny fialan'izy ireo ao amin'ny Banque Saudi Fransi.
Ity banky ity koa dia manandrana mikitika ny tsena hafa. Ny haino aman-jery avo lenta sy be mpampiasa an'ny BSF dia hita taratra amin'ny toerany ara-bola matanjaka. Miezaha hanomboka karahin'ny Golfa miaraka amin'izy ireo, mazava ho azy, mendrika izany.
Tsia .20 Attijariwafa bank
Ny Banky Attijariwafa no banky lehibe ao Maraoka. Azo antoka fa tsy ao amin'ny orinasa 10 ambony ao amin'ny Gulf Jobs. Ny Banky Attijariwafa dia tena marina mpampiasa liana. Ity orinasa ity dia nampidirina tao amin'ny SNI ny orinasa Mohammed VI.
Ny banky Attijariwafa dia naorina taorian'ny fotoana nifampiresahana. Ny fifanarahana azo tanterahana eo amin'ny Banque Commerciale du Maroc sy Wafabank ary foibeny any Casablanca. Efa vita, ary ny banky Marroco dia nanomboka niasa. Asa any Golfa orinasa dia tsara miaraka amin'ny banky Attijariwafa.
Banky Arabo ao amin'ny Banky Arabo any Jordania
Ny Banky Arabo any Jordania dia orinasa tsara ao amin'ny banky sy ny tolotra ara-bola. Tsy mahagaga raha tsy miasa any UAE. Ao amin'ny Banky Arabo, be dia be olona liana amin'ny asa. Izany no mahatonga azy ireo hirehareha amin'ny maha-iray amin'ireo sehatra ara-bola goavana ao amin'ny faritra.
Nandritra ny taona maro izay dia nahasarika talenta matihanina izahay ary manohy mampiasa vola amin'ny fananganana ny fahaiza-manao sy fahaizan'ny asantsika, izay raisinay ho isan'ny fananana sarobidy indrindra. Izahay dia tsy tapaka Manome fahafaham-po ny asa ataon'ny mpiasanay, tontolon'ny asa mahomby, fanamafisana ny fifaninanana sy ny fampandrosoana.
Tsia-karena momba ny karama farany ambany ao amin'ny Banky Arabo Arabo
Ny Karatra ao amin'ny Banky Arabo Arabo. Ny orinasa dia mandrisika ny tenany fa hitondra anao any amin'ny ambaratonga ambony. Raha toa ianao Mitady asa amin'ny GCC Area. Ity orinasa ity dia mety ho safidy tsara ho anao. Ny Banky Iraisam-pirenena dia tsara amin'ny asa ao Golfa ao amin'ny orinasa Dubai.
Serasera tsara ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma. Indrindra raha te hanolotra CV na fisoratana haingana. Amin'ny lafiny iray, raha manao izany ianao voka-pikarohana ao amin'ny Golfa miaraka amin'ity orinasa ity. Azonao atao foana atsipazo ny resinao ho ao anaty tahirin-kevitra manerantany. Etsy ankilany, ho avy ny Careers amin'ny Arab National Bank safidy maranitra ho anao.
Ny orinasa iray hafa dia ny Banky Mashreq.
Maro ny fomba sy toerana hanaovana fampandrosoana matihanina ao amin'ny Mashreq. Ny tanjon'ny orinasa dia ny fisarihana ireo mpilalao ekipa tsara indrindra. Ny banky Mashreq mamolavola mpiasa tsirairay, ankoatra ny fihazonana ny asa tsara indrindra. Amin'ny ankapobeny, manomboka ny toeran'ny orinasa miaraka aminy id tsara.
Ity banky ity dia manolotra fanonerana ara-barotra sy tombontsoa azo avy amin'ny tsena. Noho izany, ao an-tsaina, Tokony hifanaraka ny mpitsoa-ponenana miaraka amin'izy ireo matihanina. Orinasa manome tolotra milamina ho an'ny mpiasa efa misy. Ary miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka vaovao amin'ny fahafahana manintona ao amin'ny Golfa.
Ny kolontsain'ity orinasam-pifandraisana ity dia natsangana tamin'ny soatoavina sy ny fanandramana ara-potoana. Gulf jobs in Dubai orinasa.
Ny Banky AudiNXX any Libanona
Ny Bank manana tantara lava momba ny fandrosoana ara-bola. Io banky io dia manana vokatra sy serivisy feno sy samihafa. Ary koa, Libanona dia toerana tsara hiasa amin'ny fiainana. Indrindra amin'ny fianakavianao.
Ny Bank Audi dia laharana voalohany eo amin'ireo banky Libane amin'ny resaka fananan-tany. Ankoatr'izany, manankarena mpihazona maro izy ireo. Ny fitoviana tsara indrindra, ny fametrahana ny mpanjifa, ny fampindramam-bola ary ny fandrosoana amin'ny banky dia fanombohana fotsiny izany. Audi Bank manana rafitra an-tserasera avo lenta. Izany no iray Bank Audi maimaim-poana. Lehibe malaza any Libanona.
Miara-miasa amin'io fikambanana io. Ny orinasa tena tsara, miaraka amin'ny sehatra e-banky haingam-pandeha sy haingam-pandeha. Ny fandefasana vaovao dia ahafahana manara-maso ny kaontinao CV miaraka amin'ity orinasa ity. Mamatsy vola fampindramam-bola sy karatra, mba hampahomby ny orinasa vokariny.
Ny Banky iraisam-pirenena amerikana Ahli
Ahli United Bank dia manolo-tena amin'ny famoahana ny fahantrana amin'ny sehatra rehetra amin'ny fikambanana. Manerana ny firenena Golfa dia io banky io fandraisana mpiasa ho an'ny mpiasa vaovao.
Izany no antony namolavolantsika ny fahombiazantsika tamin'ny fisarihana, ny fametrahana sy ny fampandrosoana ny talenta tsara indrindra an-tsena. Satria olona vaovao mitady asa amin'ny orinasa toy ny Ahli Bank. Dubai City Company dia manolo-tena hampiditra ity orinasa ity ireo orinasa tsara indrindra miasa any Afovoany Atsinanana.
Ity orinasa manana sata henjana ho mpampiasa ny Gulf Jobs. Ilaina ny mitantana ny fampiharana momba ny asa. Amin'ny lafiny ratsy dia ataovy azo antoka fa voasoratra tsara ny CV anao.
Amin'ny maha-mpikaroka anao dia afaka misafidy ny toerana misy anao ao amin'ny faritra ianao. Dubai City Company mijery ity orinasa ity ho an'ny mpiasa iraisam-pirenena. Satria afaka miaraka amin'ny orinasa ianao Manana fahafahana hanohy sy hanatontosa asa any amin'ny Faritr'i Golfa. Manàna traikefa za-draharaha sy mpanohana izay mahafantatra ny zavatra ilaina mba hitarika sy hahomby amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Tsia Telecommunication Zanatany
Mitadiava ny anjara asanao amin'ny serasera zain.
Ny orinasa tena liana any Moyen Orient hiasa. Zain manolotra fikarakarana maharitra. Iray amin'ireo toerana hitanao Ny asa miaraka amin'i Zain dia Linkedin. Raha ny tena marina dia misy toerana marobe izay ahafahanao mahazo fahabangana miaraka amin'izy ireo. Raha ny marina, Zain dia iray amin'ireo asa goavana tsara indrindra ao amin'ny orinasa any Dubai.
Mazava ho azy, ity orinasa ity dia mendrika ny handefa CV. Voaroaka any Maroco, Jordania, ary Koety ny vaksiny miaraka amin'i Zain. Amin'ny lafiny tsara raha manana traikefa tsara ianao Hitady asa miaraka amin'izy ireo manerana ny Afovoany Atsinanana ianao. Ny asa miaraka amin'i Zain dia afaka manantanteraka ny mpilatsaka an-tsitrapo Cal Center na ny manam-pahaizana momba ny fananana.
Tsia .26 Banque Centrale Populaire
Andramo ny hahita ny anjara asanao amin'ny Banque Centrale Populaire.
Headquarters Casablanca, Maraoka ity orinasa ity dia manome tolotra ara-bola ny vokatra. Mpialokaloka vaovao mikaroka asa miaraka amin'izy ireo manerana izao tontolo izao. Tsy avy any Marocco ihany. Satria ny banky Centrale Populaire SA dia miasa toy ny banky ara-barotra. Ary miaraka amin'ireo karazana orinasa ireo, dia mendrika ny hampihatra ny asan'ny nofinofy.
Ireo hetsika banky ireo dia ny fitantanana o ny avo indrindra. Ny orinasanay marina manoro hevitra ny mpikaroka hitantana ny fampiharana asa miaraka amin'ity banky ity. Miaraka amin'ny fandoavam-bola tsara karama amin'ny mpiasa amin'ny Banques Populaires Régionales. Afaka mahazo tolotra asa mahaliana ianao.
Mitady safidy tsara amin'ny sehatry ny banky ny fikarohana asa. Ny asa, ary ny sampan-draharaha misahana ny tombontsoa amin'ny fikambanana ao amin'ny Crédit Populaire Maroc. Etsy ankilany, ny orinasa dia naorina tamin'ny 2 February, 1961, ary manana foibe ao Casablanca, Maraoka.